Home Somali News France:Baadigoob ka socda buuraha Faransiiska
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard Cazeneuve, ayaa sheegay in uu dhaawac soo gaaray qalabkii duubayay codka diyaaraddii Jarrmanka ee ku dhacday buuraha Faransiiska. qalabkaas oo la helay ee la helay talaadadii.
Balse waxa uuu intaasi ku daray in weli ay macluumaad ka heli karaan khuburada baaraysa waxa sababay shilkaasi oo ay ku dhinteen dhamaan boqol iyo kontonkii rakaabka ahaa iyo shaqaalahii diyaarada
Generaal David Galtier oo ka tirsan ciidamada dalka Faransiiska ayaa mas’uul ka ah hawlaha samato bixinta ee laga wado buurahaasi. Waxuuna sheegay inay adag tahay in buurahani socod lagu gaaro. Waxaana samatabixintan ka qayb qaadanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Helocoptarada.
Shirikada diyaaradaha ee Germanwings ayaa joojisay mid ka mid ah duulimaadyadeedii maanta